I-Sweatpants ekhubekisayo ibangela ukuba i-Huge Stir isuke eSpain iye e-China nangaphaya kwayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zefashoni » I-Sweatpants ekhubekisayo ibangela ukuba i-Huge Stir isuke eSpain iye e-China nangaphaya kwayo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • inkcubeko • Iindaba zefashoni • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ibhulukhwe ekhubekisayo-Imifanekiso ngoncedo lwe balenciaga.com
Ipere yeebhulukhwe ezingwevu ibangela ibruhaha kuba uninzi luthi uyilo lwayo lucalucalulo kwaye lunobuhlanga. Ungaze ukhumbule ukuba isibini sibiza phantse i-1200 yeedola. Ngokuqinisekileyo ayisiyonto ingako ukuba ungaphazamiseka ngayo.
Kodwa ukuba ungumntu oMnyama waseMelika, ukuphinda uthengise into enjalo kunokuthathwa njengokugwenxa.
Kuthekani ngezi mpuphu zikhethekileyo zihlikihla abantu abaninzi ngendlela engalunganga?
Ngaba imbali iyasichaza imeko abanye abayithathayo ngokuchasene nomyili wempahla ngesigqibo sakhe sokuthengisa ezi bhulukhwe, echaza ukungazinzi koluntu?
Yintoni ebangela ukuba i sweatpants ikhubekise? Masibuyele kwimbali kancinci ukuyicacisa le nto.
Uyilo luthatha imfashini yokuba nebhokisi yomntu emfutshane ikrobe esinqeni kwaye iyenze ibe yingubo enye edibeneyo, oko kuthetha ukuba yakhelwe ngaphakathi.
Isiteyitimenti sefashoni siqale emva phaya kwiminyaka yoo-1990, ngakumbi imvumi yomculo wehip hop uKriss Kross owayenxibe iblukhwe zabo - ngasemva - ezantsi kweembethi manqindi ezazingakhiwanga, kodwa yabamba. Ayisiyiyo leya ibhlukhwe ibuyela umva kodwa ibhulukhwe eshukumayo kunye neembethi manqindi ebonisa inxenye.
Kungekudala yaba luphawu lwefashoni kubantu abancinci abamnyama baseMelika. Ngo-2000, nangona kunjalo, amanye amazwe aseMelika adlulisa imithetho evala ukwenziwa kwempahla ngale ndlela, kodwa abagxeki bathi oku kucalulwa ngokungafanelekanga ngabantu abaMnyama.
Eminye yale mithetho iye yachithwa njengoko iAmerican Civil Liberties Union ifumanise ukuba umzekelo eShreveport, eLouisiana, unyanzeliso lomthetho lwalusebenzisa lo mthetho ubhulukhwe we-saggy njengesizathu sokujolisa kubantu abaNtsundu kunye nokubakhangela kwaye nokubavalela.
Ukuya kwiCandelo lobuhlanga
Ke xa umyili wefashoni ephezulu u-Balenciaga ebeka ezi mbethi manqindi ezakhelwe-ngaphakathi kwibhanti ye Trompe L'Oeil line, yayingeyiyo i-1,190 yexabiso lesitikha abantu ababecaphukiswa yiyo, nangona abanye ku-twitter Utyhola ileyibhile yemigangatho emibini kwaye wabuza ixabiso lebhulukhwe ngexabiso eliphezulu.
Uthini omnye umsebenzisi weTikTok kukuba iblukhwe "ziziva zinobuhlanga" kuba ikrazula inkcubeko yabantu abaMnyama. Le TikTok ithile, ngasendleleni, ekubaleni kokugqibela ijongiwe ngaphezulu kwesigidi se-1.6 samaxesha. Xa umsebenzisi weTikTok uMnu200m wabona iblukhwe zikaBalenciaga zithengiswa eLondon kwaye wathumela ividiyo, umntu unokuvakala esithi: "Oku kuvakala ngathi kunobuhlanga kakhulu ... ”
Kwakukho nabanye nangona besithi abayifumananga i sweatpants ukuba babe nobuhlanga. Olunye uluvo lathi ukuthunga iimbethi manqindi kwiibhlukhwe yinto eyayiqhelekile kwiminyaka yoo-90.
Imifanekiso ngoncedo lwe balenciaga.com
U-Balenciaga uthe uhlala edibanisa iziqwenga ze-wardrobe zibe yingubo enye kwaye ukhankanye imizekelo ebandakanya "ijean elele phezu kwe bhulukhwe ye tracksuit [kunye] nehempe ezinamaqhosha ezibekwe ngaphezulu kwezikipa," ucacise watsho iGosa eliyiNtloko leNtengiso, uLudivine Pont. “Le bhulukhwe iTrompe L'Oeil ibilulwandiso lwalo mbono.”
Nini Ukuphonononga iwebhusayithi yeBalenciaga, inazo nezinye izinto zewadi ezidityanisiweyo ezinje ngeeKnotted Sweatpants ezineswiti eyakhelwe-ngaphakathi ebotshelelwe esinqeni ... nge $ 1,250. Izikipa ezinokukhubekisa, ngasendleleni, kubonakala ngathi zinyamalale kwiwebhusayithi ubusuku bonke.
Imbali engakumbi ekufuneka uyiqwalasele
Imvelaphi yokwenene yale ngxelo yefashoni yeebhulukhwe ezi-sagging enembali emnyama kakhulu. Kwaqala xa abaNtsundu baqala ukugqilazwa eMelika kwaye bavela kwisiko ekubhekiswa kulo njengokuqhambuka kwembumba okanye “ukophulwa kwembuzi.” Ngelixa la magama ekuqaleni ayebhekisa ekulawuleni amahashe asendle, abanini bamasimi akumazantsi basebenzise la mabinzana ukubhekisa kumkhwa "wokuqhekeza" amakhoboka angamadoda angcolileyo.
La madoda aMnyama aya kusiwa kwindawo kawonke-wonke apho onke amakhoboka enziwa ukuba abukele njengoko wayeyalelwa ukuba athobe ibhulukhwe kwaye agobe phambili. U "master" wayeyidlwengula kabuhlungu le ndoda kwaye athathe ibhanti lakhe emva koko ngenjongo yokuba ibhlukhwe yakhe ihle. Oku kwamenza uphawu lokuba "u-busted" okanye "waqhekezwa" ukunqanda amanye amakhoboka kwizenzo zokungathobeli.
Eli ayiloxesha lokuqala umyili wefashoni ewela ngaphaya komda wokuziphatha. Kwiminyaka embalwa emva, indlu yamandla yefashoni yaseSpain uLowewe wazisa elimnyama elimhlophe elinemigca ihempe kunye nebhulukhwe iseti (kunye nehempe kuphela ethengisa i- $ 950) njengenxalenye yengqokelela ekhethekileyo yecapsule. Ichazwe njengephefumlelweyo ngenkulungwane ye-19 yamaNgesi u-ceramicist uWilliam De Morgan.
Isinxibo, nangona kunjalo, satsala impikiswano ngoko nangoko xa abantu bathi sasifana kakhulu nesinxibo esasinxitywe ngamabanjwa kwiinkampu zoxinaniso zamaNazi ngexesha leMfazwe yesibini yeHlabathi.
NgoSeptemba 16, 2021 kwi-18: 41
Ngubani ongathenga ibhulukhwe ebila i-1200, ngaphandle komzi-woluntu, i-champagne socialist, okhonza inkunkuma ye-ghetto, ngelixa engayisebenzisi indleko yokuhlala kude kubo kangangoko?